Kedu ihe na - emepụta ngwá ọrụ Amazon dị mma nke nwere arụmọrụ n'ezie?
Onye ọ bụla maara na njikarịcha Search engine maara na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume ịghọ onye ahịa na-aga n'ịntanetị na Amazon n'ebughị ihe ọ bụla na-eme ka ihe dị mfe. Ònye ka ọ dị oke mkpa ịhọrọ nhọrọ ziri ezi? Nanị n'ihi na ị ga-enwerịrị anya ịchọrọ nyochaa isi ngwaahịa gị, chọpụta ọhụụ ọhụụ ọhụrụ, ma chọọ maka inweta ohere ohere ị ga-enweta na ntinye ederede gị.
N'ikpeazụ, isi ihe mgbaru ọsọ nke ma eleghị anya ihe ọ bụla ị nwere ike ịchọtara na Amazon bụ ịchọpụta obere asọmpi maka ngwaahịa ndị kachasị mma, n'etiti atụmatụ ịzụ ahịa dị elu iji nyere aka gbanwee ihe ndị ị nwere ike inweta n'ime ndị na-ere ahịa n'ezie.Ma olee otu esi choro nhọrọ kwesịrị ekwesị nke ga-adabara na mkpa gị na ihe mgbaru ọsọ azụmahịa? Ọfọn, nke ahụ na-adabere.
Ihe bụ na ezigbo onye enyemaka dị n'ịntanetị bụ iji nyere gị aka ịchọta isiokwu ndị ziri ezi na ogologo oge ịchọta ahịrịokwu ndị ga-ewuli ihe kachasị emetụ n'obi. N'ụzọ dị otú a, a na-atụ anya na ị ga-eburu gị olu dị elu. N'ikpeazụ, iji mee ka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mmekọrịta mezuru na saịtị Amazon, n'aka nke ya, na-enye ìhè akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ iji mee ka ọnọdụ gị dị elu karị karịa oge. Ihe ọ bụla, ihe ọ bụla dị mkpa maka nchọpụta nyocha - ma ọ bụ otu ihe nyocha nke isiokwu, ntanetị n'elu igwe na ihe nkwekọrịta zuru ụwa ọnụ, ngwanrọ ọkachamara / ngwanrọ ọrụ, ma ọ bụ "ịgbanye" isi - nyere - enye gị ọrụ na uru ndị a:
Nke kachasi elu nke mkpụrụ osisi.
Mmetụta ụda olu ọchụchọ.
Ọnụ ọgụgụ nkịtị nke CPC.
Atụmatụ isiokwu dị mkpirikpi.
Nghọta nghọta na nhazi nhazi.
Ngwa ngwá ọrụ Amazon a zuru oke nwere ike inyere gị aka ịmepụta ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke mkparịta ụka na-emeri, na ngwaahịa dị ogologo nyocha ọchụchọ maka nchịkwa ngwaahịa gị iji nọrọ na-adị kwa ụbọchị, ma nwee ohere ọhụụ nke igosi nsoro n'elu ahịa ịchọta ahịa n'ebe ahụ. N'etiti ndị ọzọ, SkyRocket nwere ike inyere gị aka ịmepụta ihe dị ka isiokwu 200 dị oke mkpa na otu ASIN, nye ndụmọdụ ndị dị irè na isi isiokwu dị mkpa maka ịtụle ngwaahịa maka ire ere, ma nyere gị aka ịhazi ihe ndị dị mkpa maka gị njikwa njirimara nke ndi ahia.
Ọ bụ ihe ọzọ dị mma ịhọrọ ịghọ ngwá ọrụ Amazon, bụ nke zuru oke ike ịrụ ọrụ niile dị na isiokwu ndị a dị na ya na ndị ọzọ nchịkọta ọchụchọ na ngwaahịa gị.Site na nchekwa data buru ibu na-ekpuchi ihe dị ka nde mmadụ iri anọ na nyocha nke ndị na-ere ahịa na Amazon, Onye na-enyocha isiokwu na-ama ihe niile banyere n'elu na-emepụta okwu gị ezigbo ndị iro gị maka ọkwa. Ị ga - enwekwa ọgba aghara oke oke ma ọ bụ ntanetị nke nnukwu data - ọbụna ndepụta nke okwu ndị na - asọmpi gị juru na ọtụtụ puku okwu ọchụchọ dị iche iche nwere ike ịghọ ngwa ngwa nke nwere naanị nke ọma na ịhazi data. Echefukwala na ị nwere ike iji ngwá ọrụ a dị ukwuu iji kpoo mkpọsa PPC gị ma melite nsonaazụ mgbasa ozi gị na ọkwa dị elu Source .